5 Fomba fisainana momba ny traikefa - fitadiavam-bola
Home » Blog » 5 Fomba fiasa momba ny traikefa
Na firy na firy ny efa niasanao, ny olona rehetra dia samy manana andro iray izay tsy mahatsapa ho mandeha any amin'ny gym. Amin'ny andro toy izany, dia mora kokoa ny mijanona eo am-pandriana ary manindry ny bokotra miala amin'ny ala. Na izany aza, afaka manentana ny tenanao hitazona ianao miasa amin'ny fividianana fitaovana fiasa tsara.
Iza no mankahala kiraro vaovao? Raha te hahazo fanentanam-panahy ianao, dia mila manampy mpitaingina kiraro maranitra amin'ny fitaovanao fanatanjahanao ianao. Raha azo atao, tokony hifidy mpivady izay mifanaraka amin'ny ankamaroan'ny akanjo fitetezam-bady ianao. Rehefa manao izany ianao dia hanomboka hahatsapa tsara momba ny tenanao sy ianao vonona ny handresy ny gym zavatra voalohany amin'ny maraina.
Raha tianao ny kiraro mamiratra, dia mety hanomboka hitafy azy ivelan'ny gym. Mila fanampiana amin'ny fanangonana ny mpivady ve ianao? Tokony handona ny fivarotana fitaovam-piadiana ao an-toerana ianao ary hangataka fanampiana avy amin'ny iray amin'ireo mpikarakara azy. Ny iray amin'ireo mpikambana ao amin'ny Staff dia hanampy anao hahita ny mpivady marina izay hifanaraka amin'ny toerana misy anao sy ny ezaka mitokana.
Raha tsy mahita ny lokon'ny safidy ianao dia tokony hijery Internet. Mila mitandrina ianao rehefa mividy kiraro an-tserasera mba hisorohana ny fividianana ny habe tsy mety. Ataovy azo antoka fa hijery ny sanda lehibe ianao satria tsy mitovy ny azy rehetra.
Tokony hividy akanjo fitafy izay azonao anaovana ivelan'ny toeram-pisakafoanana ianao. Rehefa manao sweaty malefaka ianao, dia hahatsapa toy ny hoe mihosotra lamba bodofotsy. Raha mandany fotoana mandany fotoana ianao rehefa miova amin'ny toeram-pisakafoanana, dia tokony hihevitra ny hanao ny hatsembohanao ianao satria ny mpiasa dia tsy dia mendri-piderana loatra.
Raha manao hatsembohana ianao miasa, dia tsy voatery handany folo minitra mialoha ny handrodana ny gym. Ankoatra izany, ny fanaovana ny akanjo fanatanjahanao ivelan'ny toeram-pivarotan-tena dia manome fahafahana anao hivezivezy malalaka mandritra ny andro. Rehefa manao akanjo am-pitiavana ianao, dia hahatsapa ho maivana kokoa ianao amin'ny fananganana tohatra fa tsy mandeha.
Misaotra noho ny fahaizan'izy ireo, ny leggings dia nahazo diplaoma avy amin'ny akanjo fampakaram-bady ho an'ny lamosina loko. Rehefa mividy entana ianao, dia ho hitanao ireo silhouettes izay tena mamela heloka, modely mafy, lafy tsara, ary lamba malefaka. Raha toa ka matanjaka sy manahirana ny toetr'andro, dia afaka manome marika kely marika ianao mba hampiroborobo ny fanahinao.
Raha mividy leggings roa ety anaty aterineto ianao dia mila mahafantatra ny mombamomba anao marina. Ohatra, raha mividy leggings mahazatra toy ny kofehy avy amin'ny MoveU, tokony hanome ny marianao marina ianao.
Azonao atao ny maneho ny lahatsoratranao amin'ny alàlan'ny fitarihana ny top-drakotrao mankany amin'ny gym. Ny fanaovana izany dia mety hiteraka kisendrasendra vitsivitsy ary hanentana ny mpandihy gym vaovao hanombohana resaka. Ataovy azo antoka fa misafidy teny filamatra izay miresaka aminao ianao ary maneho ny fihetseham-ponao. Azonao atao ny mividy tapa-tào toy izany na manamboatra azy manokana.
Mila mifidy teny filamatra tokana ianao izay mamela anao hitsahatra ny zavatrao ary mifanaraka amin'ny toetranao. Raha azonao atao ny mamoaka ny fihomehezanao isaky ny mahita ny tendrony ambony amin'ny fitaratra ianao, dia ho afaka hampiakatra ny fanahinao.
Ny sombintsombim-pihetsehana izay miakatra eo amin'ny lohalika dia hampitombo ny fihodirana amin'ny tongotrao ary hahatonga anao ho tsara. Ankoatra izany, dia tsara izy ireo amin'ny fisorohana ny fitsaboana varicose ary afaka manatsara ny fahaizanao ao amin'ny gym. Ny kiraro fanenana dia manakana ny fihenan'ny fluid ao amin'ny vatanao hozatra, izay tena tsara tokoa ny mandinika ny làlan-kiran'ny taolam-balala aorian'ny fampiofanana.
Raha manontany tena ianao raha manao akanjo na kiraro amin'ny toeram-pisakafoanana, dia manainga mora kokoa ny fanapahan-kevitrao. Raha mbola eo an-tongotra foana ianao eo am-piasana, dia tokony hihevitra ny hanao ny kofehinao ianao mba hiasa. Amin'izany fomba izany, dia ho azonao mandritra ny fotoana lava izy ireo, midika izany fa horaisinao ny tombontsoa lehibe indrindra.
Fitaovam-pihetseham-po, mahafinaritra ary mampifandanja ny fitaovam-pandanjalanjana hahafahanao mahatratra ny tanjonao amin'ny vanim-potoana. Ankoatra izany, dia hahatsapa bebe kokoa momba ny tenanao ianao, izay midika izany fa ho eo amin'ny fomba fiainanao ny fomba fiainanao mahasalama.